Turkey iyo Greece oo isku Khilaafsan Masjid ka Dhigista Hagia Sophia
Hagia Sophia oo ay Muslimiintu salaadda Jimcaha ku oogayaan.
Turkiga iyo Giriiga ayaa Sabtida maanta ah is-dhaafsaday ereyo ad-adag oo ku aaddan tallaabada dhismaha Hagia Sophia dib looga dhigay Masjid, maalin uun kadib markii salaadda lagu oogay goobtan markii u horeysay ee muddo ku dhow 90 sanadood.
“Greece waxa ay mar kale muujisay cadowtooyada ay u qabto Islaamka iyo Turkiga, iyada oo marmarsiiyo ka dhiganaysa Masaajidka Hagia Sophia oo loo furay salaadda,” ayuu qoraal uu maanta soo saaray ku sheegay Hami Aksoy oo ah Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkey.
Munaasabaddii Salaadda Jimcaha ee Hagia Sophia ayaa suurtogelisay hammigii Erdogan ee dib ugu soo celinta in muslimiinta ay ku cibaadeystaan goobtan, oo inta badan dadka reer Greece ay u arkaan mid udub dhexaad ah diintooda.
Giriiga iyo Turkiga ayaa isku khilaafsan arrimo dhowr ah oo kala duwan, waxaana ay u kala gosyteen Qubrus qaab isir ku saleysan. Toddobaadkan ayay sidoo kale isweydaarsadeen hadallo kul-kulul oo ku saabsan aag ku yaalla bariga badda Mediterranean ka, oo loo maleynayo in uu ka buuxo Kheyraadka dabiiciga ah.